Hunters Roots Cafe - Imagazini yoyilo
Cafe Ukuphendula ngokufutshane kwifayile yanamhlanje, ecocekileyo yobuhle, ingaphakathi eliphefumlelwe ziikhreyithi zeziqhamo ezenziwe ngamaplanga ezisetyenziswa kwifom esebenzayo zenziwa. Iikhreyithi zigcwalisa izikhala, zenza ifomu yokuntywila, ephantse yabakho emqolombeni, ukanti enye yona iveliswa ngokulula nangokuchanekileyo imilo yejiyometri. Isiphumo ngamava omhlaba acocekileyo nolawulwayo. Uyilo lobuqili lukwandisa indawo encinci ngokuguqula ukulungiswa okusebenzayo kwiimpawu zokuhlobisa. Izibane, iikhabhathi neeshelfhi zinegalelo kwimbono yoyilo kunye nokubonwayo kokukrola.
Igama leprojekthi : Hunters Roots, Igama labayili : Kei Kitayama, Igama lomthengi : Hunters' Roots.